Thwebula VLC 2.0.6 isizulu – Android – Vessoft
VLC – an lula ukusebenzisa isidlali ukudlala amafayela alalelwayo video. Isofthiwe isekela multimedia eziningi izakhiwo kanye ukudlala amafayela enkulu ngaphandle kokulahleka quality. VLC ikuvumela ukubuka ukusakaza video, ukusebenza kanye engezansi bese uhlunge amafayela lwemibhalo yisayizi nofana igama. VLC iqukethe izihlungi eziningi esakhelwe futhi Equalizer ayishumi band ukuba ulungise izinga sokudlala of amafayela emidya. Futhi VLC kwenza ukulanda video amafayela ngokusebenzisa inethiwekhi ye-Wi-Fi ngiyosebenza Dropbox storage ifu.
Usekela eziningi media takhiwo
Kwakha umtapo multimedia
Ushintsho Quick of the isihlokwana and audio amathrekhi
Inani elikhulu ehlunga esakhelwe
Amazwana on VLC:
VLC Ahlobene software:
English, Українська, Français, Deutsch... MX Player 1.8.10
English, Afrikaans, Українська, Français... PlayerPro 3.1